प्रकाशित मिति १ माघ २०७५, मंगलवार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल माघ १ गते भौमबार नेपाल सम्बत ११३९ पोहेलाथ्व तदनुसार सन् २०१९ जनवरी १५ तारिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि राती ७ वजेर ४६ मिनेटसम्म उप्रान्त दशमी तिथि,अश्विनी नक्षत्र विहान ९ वजेर ४५ मिनेटसम्म उप्रान्त भरुणी नक्षत्र,साध्ययोग,बालव करण,आनन्दादियोग अमृत,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा मेष राशीमा ।
राहुकालः–अशुभ अपरान्ह २ वजेर ५१ मिनेटबाट ४ वजेर १० मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ९ वजेर ३५ मिनेटबाट १० वजेर ५४ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य मध्यान्ह १२ वजेर १३ मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर ३२ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान ९ वजेर ४ मिनेटबाट अपरान्ह ९ वजेर ४६ मिनेटसम्म र राती १० वजेर ५२ मिनेटबाट ११ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५२ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ ।
दिन बार बेला
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर १६ मिनेटसम्म रोग वेला,८ वजेर १६ मिनेटबाट ९ वजेर ३५ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,९वजेर ३५ मिनेटबाट १० वजेर ५४ मिनेटसम्म चर वेला,१० वजेर ५४ मिनेटबाट १२ वजेर १३ मिनेटसम्म लाभ वेला,१२ वजेर १३ मिनेटबाट १ वजेर ३२ मिनेटसम्म अमृत वेला,१ वजेर ३२ मिनेटबाट २ वजेर ५१ मिनेटसम्म काल वेला,२ वजेर ५१ मिनेटबाट ४ वजेर १० मिनेटसम्म शुभ वेला र ४ वजेर १० मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म रोग वेला रहनेछ ।
रात्री बार बेला
सूर्यास्तबाट ७ वजेर ११ मिनेटसम्म काल वेला,७ वजेर ११ मिनेटबाट ८ वजेर ५२ मिनेटसम्म लाभ वेला,८ वजेर ५२ मिनेटबाट १० वजेर ३३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१० वजेर ३३ मिनेटबाट १२ वजेर १४ मिनेटसम्म शुभ वेला,१२ वजेर १४ मिनेटबाट १ वजेर ५५ मिनेटसम्म अमृत वेला,१ वजेर ५५ मिनेटबाट ३ वजेर ३६ मिनेटसम्म चर वेला,३ वजेर ३६ मिनेटबाट ५ वजेर १७ मिनेटसम्म रोग र ५ वजेर १७ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म काल वेला रहनेछ ।
मेषः– समस्याको समाधान पत्ता लाग्नेछ । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षमा हुनुहुनेछ । पढाई प्रति ध्यान कम जानेछ । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । अनावस्यक खर्चमा थोरै कमि आउनेछ । सहयोग सहानुभुति मिल्नेछ । भोज भतेर एवं सभा सम्मेलनमा भाग लिने निम्तो आउन सक्छ ।
वृषः– मन भ्रान्ति हुनसक्छ । शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । उपलब्धिका काममा अवरोध आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । संचित धन नास हुनसक्छ । व्यर्थको घुमाई बढि हुनेछ । व्यापारमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । आफन्तबाट नै विरोधीको व्यवहार हुनसक्छ । परिश्रमको मुल्य पाईने छैन । आस्था र विश्वास घट्नेछ ।
मिथुनः– सामान्यतया दिन अनुकुल देखिन्छ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रो हुनेछ । घर परिवारमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । कार्य लगनशिलता बढाउनु होला । प्रयत्न गरेमा उधारो रकम उठ्नेछ । सहयोग गर्ने पनि भेटिने छन् । प्रलोभनमा पारेर फाइदा लिन खोज्दै छन् सतर्क रहनुहोला ।
कर्कटः–असहज स्थितिबाट सहज स्थितिमा प्रवेश हुनेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । गुमेको विश्वास पलाउनेछ । कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । सहयोगी हात भेटिने छन् । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । पार्टनरमा काम नगर्नु होला ।
सिंहः– समयले पूर्ण साथ दिने छैन । तर स्वास्थ्यमा सुधार एवं तनावमा थोरै कमि आउनेछ । आन्तरिक भन्दा बाह्य र फाईदाका भन्दा घाटाका काम बढि हुनेछन् । आशा र भरोसामा काम गर्दा पछि परिनेछ । पढाईमा रुची बढ्नेछ । धार्मिक क्रियाकलपमा सक्रियता बढ्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
कन्याः– दिन प्रतिकुल बढि देखिन्छ । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुनेछ । काम गर्ने वातावरण खलबलिनेछ । दुर्जनहरुको सक्रियता बढ्नेछ भने सहयोगी हात पन्छिने छन् । दैनिका काममा समस्या आउन सक्छ । मानसिक तनावमा वृद्धि हुनसक्छ । खर्च बढ्नेछ । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ ।
तुलाः– दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला सपनाले साकार रुप लिनेछ । प्रयत्न गर्नु होला नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । पुरानो विवादको टुङ्गो लाग्नेछ । दैनिका काम काजमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावनाहरु देखिनेछन् । जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण कामहरु हुनेछन् ।
वृश्चिकः–संघर्षको बाटो तय गर्नु होला सहज रुपमा केहि काम हुने छैनन । कार्य क्षेत्रमा शत्रुहरुको आगमन हुनसक्छ सुरक्षित हुनुहोला । अरुको भर विश्वासमा काम गर्नु भयो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुक्नेछन । व्यापारमा सामान्य सुधार आउनेछ । राजनीति तथा नोकरीमा बढि तनाव हुनसक्छ । प्रतिश्पर्धाबाट टाढा नभाग्नु होला ।
धनुः– दुविधा बढ्न सक्छ । समयमा निर्णय लिन सकिएन भने उपलब्धि गुम्न सक्छ । लेनदेन कारोवारमा समस्या आउन सक्छ । इच्छाशक्ति मरेर आउनेछ । वोलीको अनर्थ लाग्न सक्छ । आफन्त पराई हुनसक्छन् । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । शैक्षिक तथा वैदेशिक कार्यमा आँशिक सफलता मिल्नेछ ।
मकरः– शारीरिक एवं मानसिक थाकान बढि हुनेछ । आवेगमा आएर कुनै काम नगर्नु होला क्षति बढि हुनसक्छ । आफ्नो धन खर्च गरेर अरुलाई सहयोग गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । विवादबाट टाढा बसेर काम गर्नु होला । झुट्टा कुराले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । संचित धन घट्नेछ । मन विसाउने चौतारी मिल्ने छैन ।
कुम्भः– उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । थोरै प्रयत्न गर्नु भएको खण्डमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । धार्मिक काममा धन खर्च हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार,साथी भाइबाट सहयोग मिल्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा विचार पु¥याउनु होला । गुह्य कुरा नखोल्नु होला ।
मिनः– कुटनैतिक विधि अप्नाएर काम गर्दा बढि उपलब्धि हात लाग्नेछ । आर्थिक कारोवारमा सामान्य सुधार आउनेछ । वोलीको प्रभाव थोरै पर्नेछ । प्रयास र प्रयत्नहरु सफल हुनेछन् । परिश्रम अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा त्यति ध्यान जाने छैन । साझेदारले दुःख दिन सक्छन् ।
खल्तीका सहिद: कामचलाउ मन्त्रीका गोजीबाट सुची झिक्दै, सहित तोक्दै !
काठमाडाैं । मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले…
गगन थापाले १४ करोड घुस खाएको प्रसाईको आरोप
काठमाडौं । बि.एन.सी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले प्रसाईले गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १४…
परमादेशै टेर्दैन नेपाल बैंक, अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हाल्ने तयारी
काठमाडौंठ । नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्न आनाकानी गरेको छ । सेवा निवृत्त २७१ जना कर्मचारी…
योनि र लिंग यसरी मालिस गर्दा बढ्छ यौन क्षमता
डा दिनेश बाँस्तोला बुढेसकालमा यौन दुर्बलता हुनु स्वाभाविकै हो । बुढेसकालमा यौन चाहना हुने भए पनि यौन शक्ति कम…
तरकारीको विषादी परीक्षण: नेपालीलाई सास्ती, भारतीयलाई मस्ती
मोरङ । तरकारी भारतबाट आउने मात्र होइन, नेपालबाट उता जान्छ पनि । तर, निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायी भारतीय अधिकारीबाट…
सुन काण्ड : समितिको सूचिमा नरहेका व्यक्ति पक्राउ, तस्करीको पैसा संसदलाई !
विराटनगर । सनम हत्याकाण्ड र तस्करीको साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । ‘गोल्ड डन’…
मुख्यमन्त्रीकै सरकारी कार्यकक्षमा मदिरा पार्टी
विद्यार्थीका लागि रोजगार आजको आवश्यकता 17 views
ससुरा बा ! (कथा) 12 views
पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका 11 views